काठमाडौं -मान्छेको शरीरमा ससाना डल्ला जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ । कसैकोमा एउटा मात्र होला भने कसैकोमा सयवटा डल्ला होलान् । यी डल्ला हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् तर यिनले खासै हानि गर्दैनन् ।
सौन्दर्यलाई भने यिनीहरूले बिगार्छन् । सौभाग्यवश, यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ । चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो) ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ ।
यसका लागि तपाईंले कपास चुक अमिलोमा डुबाउनुस् । त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दिनको दुईतीनचोटि घोट्नुस् । यो प्रक्रिया दिनदिनै दोहो-याउनुभयो भने डल्लाको रंग परिवर्तन हुन्छ र आफैं झरेर जान्छ । यसो हुन लगभग एक हप्ता लाग्छ (अलिक बढी पनि लाग्न सक्छ) । त्यसैले धैर्य गर्नु जरूरी हुन्छ ।
मान्छेमा छालाका डल्ला पलाउनु सामान्य कुरा हो । यी हानिरहित डल्ला छालाबाट झुण्डिएका साना र नरम बेलूनजस्ता देखिन्छन् । पुरुष र महिला दुवैमा छालाको डल्लो हुन सक्छ । प्रायः मोटा मान्छेमा छालाको डल्ला निस्कन्छन् । कुनै कुनै डल्ला आफैं झर्छन् भने कुनै चाहिँ रहिरहन्छन् । यिनलाई मेडिकल भाषामा एक्रोकोर्डन भनिन्छ ।
कागती पानी पिउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस्
जान्नुहोस अमलाका ७ बेजोड फाइदा
भटमासका फाइदा मात्रै छैनन्, यस्ता व्यक्तिका लागि बिष...
काठमाडौंवासीले घरमै बसीबसी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं– राजेश्वर ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]
कहाँ पुग्यो पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम ?
रामचन्द्रलाई शेखरले भने– ‘म अगाडि बढेँ, आशीर्वाद दिनुस्’
नगर कप फूटबल प्रतियोगिता मंसिर २८ गतेदेखि
ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा पर्दा तत्कालै रकम भुक्तानी गरेर कागजात फिर्ता पाइने
भारतका सेनाप्रमुख नरवणेलाई बनाइन सक्छ नयाँ सीडीएस
देउवाले विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्न लागेपछि पौडेलले गरे बैठक बहिष्कार
मोदीलाई राष्ट्रिय स्तरमा चुनौती दिने ममता बनर्जीको धोको, मृगतृष्णा कि यथार्थ ?
लमजुङ जीप दुर्घटना अपडेट : ३ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते
भुस्मेमा जीप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते